120W Ahịa nke Monocrystalline Silicon Photovoltaic China Emeputa
Nkọwa:120W Monocrystalline Silicon Solar Panels,Mpempe akwụkwọ Mkpụrụ Silicon,Mallcrystalline Silicon Solar Panels
120W Monocrystalline Silicon Solar Panels,Mpempe akwụkwọ Mkpụrụ Silicon,Mallcrystalline Silicon Solar Panels
Home > Ngwaahịa > Ngwa igwe na panel > Mallcrystalline Silicon Solar Panels > 120W Ahịa nke Monocrystalline Silicon Photovoltaic
Ubu oke: 50000pcs/day
Usoro HS: 8541409000
120W Monocrystalline Silicon Solar Panels [atụmatụ] nnukwu arụmọrụ na-emepụta ihe dị iche iche na-arụ ọrụ nke ọma. hụ mmepụta ikike.
[Akụrụngwa ngwa] Uhie ogige ọkụ, ntakịrị ọkụ ọkụ ụlọ, ìhè ọkụ n'okporo ámá anyanwụ, mgbasa ozi anyanwụ na-apụta, dị mma maka ụdị obere ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ mgbasa ozi, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ụlọ, ìhè igwe okirikiri, oghere ike anyanwụ, wdg.
[Njirimara na uru] Nkọwaputa akakabawanye, arụmọrụ dị elu; Ike utịp dị ike; Akwa iko nke nwere nghọta dị oke nghọta; Nkà na ụzụ dị iche iche iji mee ka mmiri ndị ahụ mara mma na nke siri ike na snow, ntinye dị mfe nke teknụzụ pụrụ iche iji gbochie mmiri na-abaghị na mmiri na-arụ ọrụ;
Atụmatụ: nchedo gburugburu ebe obibi, ọ dị mfe iji ya mee ihe n'ụzọ akụnụba, na-egosipụta nchebe gburugburu ebe obibi, oge a, sayensị na omenala.
Jiri akara ugbo ikuku nke otutu mmiri na-ekpuchi iji kpuchie ihe ndi ozo; enwe ezi ngbochi ihu igwe, windproof, igbochi iku mmiri; ike na-eguzogide mmiri ma na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ bụghị gburugburu ebe obibi
Ngwaahịa : Ngwa igwe na panel > Mallcrystalline Silicon Solar Panels
Mpempe akwụkwọ Mkpụrụ Silicon